3 Antony mahatonga ny fampiasana Wordpress ho hevitra tsara | Famoronana an-tserasera
Jose Angel | | Famolavolana tranonkala, Wordpress
Ny fampiasana WordPress dia nanjary fahita matetika isan'andro, minoa na tsia. Na dia, isika rehetra izay manomboka, dia mila ny tranonkala matihanina indrindra. Ho an'ity dia heverinay fa fomba iray ihany: mpamorona tranonkala. Fantatray fa lafo io safidy io ary tsy ny olon-drehetra no mahazaka izany. Orinasa natokana ho an'ny tranonkalantsika, manao fikojakojana aotra sy aotra manaraka. Amin'ity tranga ity dia misafidy ny hizaha amina mpitantana atiny rehetra mieritreritra an'izany izahay. Fa WordPress dia fitaovana matanjaka be.
WordPress no fitaovana fanaovana bilaogy be mpampiasa indrindra. Saingy lavitra ny fijanonana eo, ny fampiasana WordPress dia afaka mamaha ny asanao na inona na inona karazany. Na fivarotana izany, gazety nomerika toa an'i Creativos Online na 'teatra an-trano' toa an'i Netflix. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome antony telo antony mbola fampiasan-kevitra tsara ny fampiasana WordPress.
1 Ataovy izay ilainao
2 Ilaina ny mitsitsy vola vao manomboka
3 Tsara ho an'ny Google ve izany?
Ataovy izay ilainao
Goavana ny vondrom-piarahamonina WordPress ary izany no nahasarika ny fahalianan'ny olona maro avy amin'ny faritra samihafa. Miaraka amin'ny hevitra vaovao avy amin'ny mpanjifa vaovao, ny mpamorona dia nanitatra ny fahafaha-mampiasa WordPress amin'ny fomba tsy ampoizina indrindra. Ity fanaingoana tsy manam-petra ity dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny WordPress hihanaka- Amin'ny alàlan'ny fampidirana endri-javatra fanampiny dia afaka mamorona karazana tranonkala ilainao ianao. Raha toa ka tsy vitanao ny mamita ny asanao amin'ny WordPress goavambe, azo antoka hahita plugins atolotry ny vondrom-piarahamonina noforonin'ny mpampiasa ianao. Ireo plug-in dia mampihetsika asa fanampiny ao amin'ny fametrahana anao izay mameno ny fampiasana azy.
Azonao atao ny mamorona forum na koa ny tamba-jotra sosialy anao. Miaraka amin'ny fanovana kely, ny tranokalanao dia mety amin'ny fiteny roa. Ny plugin plugin iray an'ny hetsika WordPress dia hahatonga ny fivarotana tapakila ho an'ny hetsikao ho rivotra. Tena tsy misy fetrany ny zavatra azonao atao amin'ny faharetana kely., fikarohana Google tsara, ary plugin mety.
Ilaina ny mitsitsy vola vao manomboka
Araka ny efa noresahintsika tany am-piandohana, raha te hanomboka any ho any ianao nefa tsy mandany vola be, ny fampiasana WordPress dia tolo-kevitra tanteraka. Tsy vitan'ny hoe maimaim-poana tanteraka ny WordPress, fa loharano misokatra ihany koa. Midika inona izany ho anao? Midika izany fa miasa eo aminy hatrany ny vondrom-piarahamonina tsy mitsaha-mitombo. Ny olona ivelan'ny fitantanana WordPress dia manitatra ny fahalalany sy ny fivoarany amin'ny altruistika. Izany no mahatonga ny kinova vaovao, fanavaozana, fanamboarana ary fanampiana azo alaina foana. Fifanarahana tena tsotra sy intuitive. Nisaraka tamin'ny fizarana samihafa tao anaty tsanganana izay manondro amin'ny anarana hoe inona no fiasa azonao atao amin'ny tsirairay amin'izy ireo.
Ny fananganana tranokala fototra dia tsy mitaky traikefa na fahalalana, ary zara raha manam-potoana ianao. Raha manana tetikasa manokana sy matotra kokoa ao an-tsainao ianao dia tsy olana izany fa tokony hanana fahalalana kely kokoa ianao. Misy lohahevitra maimaimpoana an'arivony (na tsy an-tapitrisany) azo ampiasaina na ampiasaina inona na inona na inona na inona no ao an-tsainao, ary tsy mitsaha-mitombo ny isa.
Raha tsy ampiharina amin'ny tranokala izay ataonao amin'ny WordPress ny fampiasa sasany ary tsy manana fahalalana ampy handaminana izany ianao dia azonao atao ny mametraka plugins maimaim-poana na karama mba hahatratrarana azy mora foana. Inona koa, misy andian-dahatsoratra foana plugins tsy maintsy ananana ho an'ny WordPress izay hanampy be indrindra rehefa manomboka mamorona tranokalanao na bilaoginao ianao.
Misaotra an'io fa misy tutorial maro ao amin'ny YouTube azo alaina. Ny fananganana tranonkalanao manokana miaraka amin'ny fanampim-bola maimaimpoana dia afaka manangona vola be.
Tsara ho an'ny Google ve izany?
Iray amin'ireo tombontsoa tsy dia fantatra loatra, saingy manan-danja tokoa izay ananan'ny WordPress amin'ny sehatra hafa, dia ny filaharana tsara kokoa ao amin'ny Google. Zava-dehibe ny laharana tsara, ary satria orinasa sarotra izy io, dia raisina an-tanan-droa ny fanampiana. Lojika fa raha mampiasa ny fotoanantsika sy ny volantsika isika dia irintsika ny hanana azy io mba hananana fisarihana tsara avy amin'ny vahoaka. Azontsika atao ny manararaotra ny ezaka rehetra ataontsika. Voalohany indrindra, WordPress dia nosoratana tamin'ny fomba iray izay nanamora ny famakian'ireo motera fikarohana sy ny laharana, misaotra kaody tsotra. Faharoa, amin'ny fampiasana azy mora kokoa, mora kokoa amin'ny fampiasana WordPress ny manavao hatrany.
Amin'ireto antony tena tsotra ireto dia mazava fa ny fampiasana WordPress dia manamora ny asan'ny maro. Ary raha mbola misalasala ianao amin'ny fahaizany mety ho an'ny orinasanao, jereo ny statistikan'ny tamba-jotra bilaogy an'ny News Blog, vita amin'ny WordPress.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » 3 Antony mahatonga ny fampiasana WordPress ho hevitra tsara